I-Flatbed CO2 Laser Cutting Machine
Umatshini weLaser we-CO2 Galvo
CO2 Laser Cutter uMkroli
Imibhobho yokungenisa umoya ngelaphu
Ileyibhile, iAdhesive, iTape eReflective
I-Sandpaper Sanding Diss
Isikhumba & Izihlangu
Umboniso bhanyabhanya woTshintsho
Malunga neGolide Laser (PDF)
Golden Laser uya kuhlonipha kwaye ukukhusela ubumfihlo bakho.Siya kukhusela naluphi na ulwazi olunikezayo xa undwendwela le webhusayithi.
01) Ukuqokelelwa kolwazi
Kule webhusayithi, unokonwabela nayiphi na inkonzo enikezelweyo, efana nokubeka iodolo, ukufumana uncedo, ukukhuphela iifayile kunye nemisebenzi yokuthatha inxaxheba.Ngaphambi kokuba uhambe kuloo nto, kuya kufuneka ugcwalise ulwazi lwakho lobuqu esinokuthi ngalo sinikeze ukhetho olufanelekileyo kunye nebhaso lokukhulula kuwe ukuba likho.
Siphucula ngokungenasizathu inkonzo yethu kunye neemveliso (kubandakanywa nobhaliso) ukuhlangabezana neemfuno zakho.Ukuba kunokwenzeka, siya kufuna ulwazi oluninzi malunga nenkampani yakho, amava kwiimveliso zethu kunye nendlela yokunxibelelana.
02) Ukusetyenziswa kolwazi
Lonke ulwazi lwakho kule webhu luya kuba kukhuseleko olungqongqo.Ngolwazi, iLaser yethu yeGolide iya kukunika inkonzo yakho engcono nekhawulezayo.Kwezinye iimeko, singakwazi ukwazisa uphando lwakho lwemarike yamva nje kunye nolwazi lwemveliso.
03) Ulawulo lolwazi
Sinomsebenzi osemthethweni wokukhusela naluphi na ulwazi esiluqokelela kuwe, kuquka impendulo okanye ezinye iindlela.Oko kukuthi ngaphandle kweGolden Laser akukho mntu wesithathu uya kulonwabela ulwazi lwakho.
Ngokuqokelela ulwazi lwakho oluvela kwiwebhu kunye nokudibanisa idatha esuka kwiqela lesithathu, siya kukucebisa ezona mveliso zibalaseleyo kunye nenkonzo.
Qaphela: Amanye amakhonkco kule webhusayithi, akunceda kuphela kwaye aya kukukhupha kule webhusayithi, okuthetha ukuba iLaser yethu yeGolide ayizukuthatha naluphi na uxanduva ngemisebenzi yakho kunye nolwazi kwezinye iiwebhusayithi.Ngoko nawaphi na amanqaku amalunga noqhakamshelwano ukuya kwicandelo lesithathu lewebhu ayakuba ngaphaya kolu xwebhu lwabucala.
04) Ukhuseleko loLwazi
Sicwangcise ukukhusela ulwazi lwakho olupheleleyo, ukuphepha ukulahleka, ukusetyenziswa kakubi, ukutyelela okungagunyaziswanga, ukuvuza, ubundlobongela kunye nokuphazamisa.Yonke idatha kwiseva yethu igadwe ngumlilo, kunye negama lokugqitha.
Siyavuya ukuhlela ulwazi lwakho ukuba uyafuna.Emva kokulungiswa, siya kukuthumelela iinkcukacha ezichanekileyo nge-imeyile ngetshekhi yakho.
05) Ukusetyenziswa kweekuki
Iikuki ziziqwengana zedatha ezenziwe xa undwendwela iwebhusayithi yethu kwaye zigcinwe kuluhlu lweekuki zekhompyuter yakho.Abasoze batshabalalise okanye bafunde idatha kwikhompyuter yakho.Iikuki zinkqaya igama eligqithisiweyo lakho kwaye ukhangele into eya kukhawulezisa ukusefa kwakho kwiwebhu yethu kwixesha elizayo.Kananjalo unokwala iikuki ukuba awufuni.
06) Yazisa ukuguqulwa
Ukutolikwa kwesi nkcazo kunye nokusetyenziswa kwewebhusayithi yeyeGolden Laser.Ukuba lo mgaqo-nkqubo wabucala uyatshintsha nangayiphi na indlela, siya kubeka uguqulelo oluhlaziyiweyo kweli phepha kwaye siphawule nomhla osemazantsi kweli phepha.Ukuba kuyimfuneko, siya kubeka uphawu olubambekayo kwiwebhu ukuze sikwazise.
Naziphi na iingxabano ezibangelwa yile ngxelo okanye ukusetyenziswa kwewebhusayithi kuya kuthobela umthetho ohambelanayo weRiphabhliki Yabantu baseTshayina.
Umbono weLaser Cutter
I-CO2 encinci yeLaser Cutter
Ifashoni & nempahla
Iikhaphethi kunye neeMat
Izixhobo zeLaser Processable
imephu-marker Goldenlaser Industrial Park, Tianxing Road, Chuanlong Avenue, Huangpi District, Wuhan, Hubei, China
imvulophu yona info@goldenlaser.com
Copyright ? 20052021 Wuhan Golden Laser Co. Ltd. Onke Amalungelo Agciniwe.